Logos ho an'ny ekipa mifaninana | Creatives Online
Manana ekipa miaraka amin'ny namanao ve ianao? Angamba nisy mpanjifa naniraka anao hanao logos ho an'ny ekipa mifaninana ho an'ny eSports na mitovy? Tsy adala araka izay eritreretinao izany, ary tetikasa iray hafa mety ho tonga aminao.
Ka mahalala inona ny toetra mampiavaka ny logos ho an'ny ekipa mifaninana, ny fomba hanaovana azy ary ny hevitra ho an'ireo logos ireo dia mety ho hevitra tena tsara. Ary avy eo dia tianay ny hanampy anao hanana ohatra ary hahafantatra izay tokony hojerenao mba hanaovana izany.
1 Toetran'ny logos ho an'ny ekipa mifaninana
1.1 Inona no fironana ananany
2 Tranonkala hamoronana logo ho an'ny ekipa mifaninana
2.2 mametraka azy
3 Ohatra amin'ny logos ho an'ny ekipa mifaninana
3.2 Rive Gaming nataon'i Slavo Kiss
3.3 Cutlass Gaming avy amin'i JP Design
3.4 ThirtyBomb avy amin'i JP Design
3.5 Dragon Esports, nataon'i Jhon Ivan
Toetran'ny logos ho an'ny ekipa mifaninana
Logos ho an'ny ekipa mifaninana dia endrika logo izay, tsy mitovy amin'ny hafa, Ezahina omena hery, herim-po, angovo, sns. Ny tanjona dia tsy iza fa ny hampifandray ny ekipa sy ny tolona ataony amin'ny fahombiazana amin'io sary noforonina io. Noho izany, ny safidy amin'ny endrika, sary, loko, ary na dia ny typography aza dia misy ifandraisany amin'izany. Miresaka bebe kokoa momba izany isika.
Amin'ny ankapobeny, ny fango ho an'ny ekipa mifaninana dia tsy maintsy manana fahatsapana mahery vaika, na ho fototry ny maha-izy azy manokana ny ekipa, fomba iray hanavahana ny tenany amin'ny fifaninanana fa koa hampifandray ny mpihaino azy, ny mpikambana ao amin'ny ekipa ary ho fanambarana ny fikasana ho an'ny rehetra. .
Ireo logo ireo dia antsoina hoe marika ekipa, satria ny zavatra tadiavina amin'izy ireo dia ny mamorona hery manodidina ny mpikambana ao amin'ny ekipa (tsy toy ny logos amin'ny orinasa iray, izay tadiaviny dia ny maneho ny marika).
Rehefa mamolavola azy io dia tonga ny mpamorona sary. Izany, araka ny efa nambarantsika teo aloha, dia tsy maintsy amboarina amin’ny lafiny sasany toy ny maha-zava-dehibe ny ekipa, ny zavatra tianao hampitaina, ny loko, ny sora-baventy, sns. Marina fa misy safidy mora kokoa na maimaim-poana (izay hodinihintsika etsy ambany) fa matetika ireo dia tsy tany am-boalohany toy ny azon'ny mpamorona.
Inona no fironana ananany
Ny ankamaroan'ny logos ho an'ny eSports na ho an'ny ekipa mifaninana dia matetika manana teboka iraisana. Ny iray amin'izy ireo dia ny avatar na sary, izay manondro lalao, biby na marika mahazatra, miresaka momba ny sabatra, satroboninahitra, mpanjaka, ampinga isika ...
Raha ny momba ny "hery", dia marina fa ny ankamaroan'ny olona dia mifantoka amin'ny fanehoana ny hery sy ny habibiana, ny "mampatahotra" rehefa mahita ny logo. Saingy tsy voatery ho toy izany foana, misy fotoana mety ho malefaka kokoa ( mikendry ny faharanitan-tsaina sy ny fahiratan-tsaina).
ny endrika mahazatra indrindra saika miloka amin'ny:
Biby: ny amboadia, gidro, tigra na liona, na voalavo mihitsy aza. Indraindray dia misy bitro, saka, alika, voay, androngo, bibilava ...
Zavaboary angano: toy ny elves, goblins, mpamosavy, dragona ...
Ny singa klasika: lapa, sabatra, fiarovan-doha, tilikambo, tendrombohitra, satroboninahitra, mpanjaka, ampinga ...
Olona: ninjas, shinigami, piraty, Vikings, mpiady, knights, miaramila ...
Endriky: tezitra, mandrisika, masiaka, masiaka...
Singa fanampiny: afo, fipoahana, mpanara-maso ny lalao, basy ...
Tranonkala hamoronana logo ho an'ny ekipa mifaninana
Raha tsy manana loharanon-karena handoavana ny asa tany am-boalohany 100% ny mpanjifanao ary mbola te-hanolotra tolo-kevitra ho azy ireo ianao dia afaka misafidy ny hamorona logos ho an'ny ekipa mifaninana amin'ny alàlan'ny maodely. Misy tranonkala maromaro ahafahanao manao izany toy ny:
Izany dia tranonkala izay ahafahanao mamorona logos eSports maimaim-poana, manaraka fampianarana. Raha manana fahaiza-manao amin'ny famolavolana ihany koa ianao, dia azonao atao ny manome azy manokana kely.
Io no iray amin'ireo safidy tsara indrindra hitanao satria manana taonina ny môdely sy ny sary, ho fanampin'izany dia afaka manao logos animé mihitsy aza ianao. Mazava ho azy fa tsy manoro azy ireo izahay satria raha atao pirinty ho an'ny varotra ny logo dia very ny fahasoavana rehetra.
Izy io angamba no iray amin'ireo pejy mifantoka kokoa amin'ny logos ho an'ny eSports. Ario ny modely mihoatra ny 200 ary azo amboarina, noho izany dia asa faran'izay kely ny hanomezana izany fikasihana manokana izany.
Ohatra amin'ny logos ho an'ny ekipa mifaninana
Araka ny fantatray fa mety mila fitaomam-panahy ianao amin'ny fanaovana logos ho an'ny ekipa mifaninana, ireto misy rohy vitsivitsy amin'ireo ohatra amin'ny endrika hafa nataon'ny mpamorona sary izay hanome anao hevitra momba ny fomba ahafahanao manamboatra azy ireo.
Mandeha miaraka amin'ny endrika izay manambady tonga lafatra isika. Ary, raha mijery akaiky ianao, dia misy teny hoe Agility Esports sy tigra mitsambikina ny logo.
Araka ny fantatrao, ny tigra dia somary kinga, tsy dia kinga tahaka ny biby hafa, fa amin'ity tranga ity dia miasa tsara satria mampiseho ny tanjany ihany koa. Amin'izay fotoana izay ihany koa Lazainao amin'ny hafa fa sarotra ny ekipa lazainao koa fa mahavita manafika rehefa tsy ampoizinao.
Hitanao io eto.
Rive Gaming nataon'i Slavo Kiss
Amin'ity tranga ity dia manana logo misy habibiana kokoa ianao raha azo atao. amin'ny mipoitra ny bera manafika, ary voatsoaka ny hohony ary hita taratra tsara ny taviny. Tsy ny bera feno izy io, satria lalaovina amin'ny aloka ary zara raha mampiseho ny kely indrindra mba hahafantaranao fa io biby io.
Avy eo, amin'ny teny, raha mijery ny R ianao dia misy famantarana sasany hoe rovitra, miaraka amin'ireo holatra ireo mazava ho azy.
Ny loko volontsôkôlà, mena, fotsy ary mainty dia manome azy kanto nefa miaraka amin'ny hery.
Cutlass Gaming avy amin'i JP Design
Tsy niresaka momba ny piraty sy ny sabatra ary ny marika mahazatra toy ny ampinga ve isika taloha? Eny ary, mivohitra daholo izany. ny jiolahin-tsambo miaraka amin'ny sabatra roa sy ao ambadiky ny ampinga iray izay mampiavaka ny tarehimarika sy ny taratasy ekipa.
ThirtyBomb avy amin'i JP Design
Amin'ity tranga ity, dia tsy miresaka momba ny isa tokana, fa telo, manokana ny biby telo toy ny vorondolo, ny amboadia ary ny bibilava. Amin'ny loko maitso, fotsy ary mavo, ny tandem amin'ny tarehimarika, amin'ny lafiny iray ny vorondolo miaraka amin'ny masony mavo manaitra, ary amin'ny lafiny iray ny amboadia sy ny bibilava, dia misy fiantraikany.
Dragon Esports, nataon'i Jhon Ivan
Amin'ity tranga ity dia afaka mahita ny fomba ny ekipa dia Dragon Esports, fa ny logo nametraka «Draken». Nahoana no mety hitranga izany? Eny, mety ho satria mascot an'ny ekipa izy io, ka izany no niantsoana azy hoe Draken.
Ny famolavolana dia manao ny dragona dia manamorona ny teny rehetra, izay tena hita maso, raha mampitandrina ny lohan’ilay dragona fa “aza mikorontana aminy”.
Azonao jerena ve eto.
Misy safidy maro hafa azonao jerena, saingy heverintsika fa amin'ireo dia manana ampy ianao hamantarana ny fomba fanaovana logo ho an'ny ekipa mifaninana. Na izany aza, raha manana fanontaniana ianao dia afaka manontany anay foana ary hiezaka izahay hanampy anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Logos ho an'ny ekipa mifaninana
Manambatra sosona amin'ny Photoshop